Vaovao - Karazana herin'ny rivotra
Na dia misy karazana turbin-drivotra maro aza dia azo fintinina amin'ny sokajy roa izy ireo: turbines rivotra axis marindrano, izay misy ny axis rotation ny kodiaran'ny rivotra amin'ny torolalan'ny rivotra; turbines rivotra mitsangana, izay misy ny axis rotation an'ny kodiaran'ny rivotra dia mifandraika amin'ny tany na amin'ny làlan'ny fivezivezena.
1. Turbine axis marindrano
Ny turbine axis marindrano dia mizara roa: karazana manainga sy karazana drag. Mihodina haingana ny turbinina miendrika rivotra, ary mihodina miadana ny karazana fanoherana. Ho an'ny famokarana herinaratra, ny turbine axis marindrano am-pahefana no ampiasaina matetika. Ny ankabeazan'ny turbinin'ny rivotra axis marindrano dia misy fitaovana fanoherana ny rivotra, izay afaka mihodina amin'ny alàlan'ny rivotra. Ho an'ny turbine kely rivotra, ity fitaovana miatrika ny rivotra ity dia mampiasa familiana rambo, raha ho an'ny turbin-drivotra lehibe kosa dia mekanisma fandefasana amina singa mahatsapa fitarihan'ny rivotra sy motera servo no ampiasaina.
Ny turbinina misy ny kodiarana rivotra eo alohan'ny tilikambo dia antsoina hoe turbine rivotra mahery, ary ny turbinin'ny rivotra misy kodiarana rivotra ao ambadiky ny tilikambo dia lasa turbine rivotra mahery. Misy karazany maro ny turbine rivotra marindrano-axis, ny sasany manana kodiaran'ny rivotra misy lelany miolakolaka, ary ny sasany kosa dia manana kodiarana mitsivalana amina tilikambo iray hampihenana ny vidin'ny tilikambo eo ambanin'ny toetry ny angovo azo antoka. Ny turbinin'ny rivotra dia mamoaka vortex manodidina ny kodiaran'ny rivotra, mampifantoka ny onjam-peo ary mampitombo ny hafainganan'ny rivotra.
2. Turbinin'ny rivotra axis mitsangana
Ny turbinin'ny rivotra axis mitsangana dia tsy mila miatrika ny rivotra rehefa miova ny làlan'ny rivotra. Raha ampitahaina amin'ny turbine rivotra axis marindrano dia tombony lehibe amin'izany. Tsy manamora ny famolavolana firafitra fotsiny izy io, fa mampihena ny herin'ny gyro koa rehefa miatrika ny rivotra ny kodiaran'ny rivotra.
Misy karazany maro ny turbine rivotra mitsangana-axis izay mampiasa fanoherana ny fihodinana. Anisan'izany, misy kodiaran'ny rivotra vita amin'ny takelaka fisaka sy quilts, izay fitaovana fanoherana madio; Windmills karazana S dia manana fiakarana ampahany, fa fitaovana fanoherana indrindra. Ireo fitaovana ireo dia manana tsela fanombohana lehibe, fa ny tahan'ny haingam-pandeha ambany dia ambany ary manome output kely ambany herin'ny habe, lanja ary vidin'ny kodiarana.